ဖင်လန် နှင့် ဆွီဒင် နိုင်ငံထဲ နေတိုးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အဦ ချဲ့ထွင်မှုကို လက်တုံ့ပြန်မည်ဟု ပူတင်ပြောကြား - Xinhua News Agency
ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့ရှိ ရင်ပြင်နီ၌ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မေ ၉ ရက်တွင် ကျင်းပသည့် ၇၇ နှစ်မြောက် မဟာမျိုးချစ်စစ်အောင်ပွဲနေ့ စစ်ရေးပြအခမ်းအနားတက်ရောက်လာသော သမ္မတဗလာတီမာပူတင်(ရှေ့)အားတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
မော်စကို ၊ မေ ၁၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ရုရှားနိုင်ငံဗလာတီမာပူတင်က အကယ်၍ မြောက်အတ္တလန္တိတ်စာချုပ်အဖွဲ့(နေတိုး) အဖွဲ့က ဖင်လန် သို့မဟုတ် ဆွီဒင်နိုင်ငံ၏ ပိုင်နက်နယ်မြေထဲ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အဦများတပ်စွဲချထားခဲ့မည်ဆိုပါက ရုရှားနိုင်ငံအနေဖြင့် လက်တုံ့ပြန် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မေ ၁၆ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။“ အဲဒီပိုင်နက်နယ်မြေထဲကို စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အဦတွေ တိုးချဲ့ချထားလာမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်လို့ သေချာပေါက် လက်တုံ့ပြန်မှု လုပ်ဆောင်သွားရမှာပါ” ဟု မော်စကိုမြို့၌ ပြုလုပ်သည့် စုပေါင်းလုံခြုံရေးသဘောတူညီမှုအဖွဲ့၏ အစည်းအဝေး၌ မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ် သမ္မတပူတင်က အထက်ပါအတိုင်းပြောကြားခဲ့သည်ဟု ကရင်မလင်နန်းတော်အရ သိရသည်။
“ နေတိုးချဲ့ထွင်မှုဟာ သိပ်ကိုကြီးမားတဲ့ အတုအယောင်ဖန်တီးလုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ပြီး အဲဒါဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒလက်နက်တစ်ခုအဖြစ် အသုံးချခံနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပူတင်က ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
“ နေတိုးအဖွဲ့ဟာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒ လက်ကိုင်တုတ်အဖြစ် အသုံးချခံနေရပါတယ်” ၊ “အဲဒါကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နဲ့ သိပ်ကို မာန်ပါပါနဲ့ ထပ်တလဲလဲ လုပ်ကိုင်နေခဲ့တာပါ” ဟု ပူတင်က ပြောကြားခဲ့ပြီး ထိုအခြေအနေက နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်ပျက်ပြားစေကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ဖင်လန် နှင့် ဆွီဒင် နိုင်ငံနှစ်ခုစလုံးသည် နေတိုး(NATO) အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် လျှောက်ထားရန် ၎င်းတို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ အသီးသီးထုတ်ဖော်ကြေညာထားပြီးဖြစ်သည်။
ဖင်လန်နိုင်ငံသမ္မတ နှင့် အစိုးရအဖွဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒ ကော်မတီသည် နေတိုးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ရေးအတွက် နိုင်ငံ၏ လျှောက်လွှာတင်သွင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်ရန် မေ ၁၅ ရက်တွင် တရားဝင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
ဆွီဒင်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် Magdalena Andersson ကလည်း ဆွီဒင်နိုင်ငံအား နေတိုးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ရေး နိုင်ငံ၏ လျှောက်ထားမှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်ရန် တရားဝင်ဆုံးဖြတ်ကြောင်း မေ ၁၆ ရက်တွင် ကြေညာခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ (Xinhua)
MOSCOW – Russian President Vladimir Putin said on Monday that Moscow would respond if the North Atlantic Treaty Organization (NATO) would deploy military infrastructure on the territories of Finland or Sweden.
“NATO is being used asaforeign policy instrument by one country, and this is being done quite persistently, skillfully and very aggressively,” Putin said, further pointing out that the situation hasadeteriorating effect on international security.
Photo – Russian President Vladimir Putin (front) passes by after the Victory Day military parade to mark the 77th anniversary of the victory in the Great Patriotic War on Red Square in Moscow, Russia, May 9, 2022. (Xinhua/Yuan Xinfang)